Ciidamada Yuhuudda oo kordhiyey Duqeynta culus ee Marinka Gaza (Geerida oo ku dhow 100 -Sawirro-) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ciidamada Yuhuudda oo kordhiyey Duqeynta culus ee Marinka Gaza (Geerida oo ku dhow 100 -Sawirro-) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ciidamada Yuhuudda oo kordhiyey Duqeynta culus ee Marinka Gaza (Geerida oo ku dhow 100 -Sawirro-)
Ciidamada Yuhuudda oo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka, Taagiyada iyo Madaafiicda Goobta ayaa sii wada duqeyn aan kala joogsi lahayn oo ay ku ekeeyeen Marinka Gaza.
Waxaa si toos ah loo beegsanayaa dhismooyinka waaweyn ee magaalada Gaza oo ah magaalo dad badan ku nool yihiin oo baaxadeeduna yar tahay, iyadoo qasaaraha dadka Falastiiniyiinta ah uu sii kordhayo.
Wasaaradda Caafimaadka Falastiin ee Marinka Gaza ayaa maanta shaacisay in dadka ku dhintay weerarrada socda ee Israa’iil ku heyso Marinka Gaza ay gaareen 83 qof oo ay ku jiraan 17 caruur ah iyo 7 haween ah. Waxaa kaloo ku dhaawacmay 487 ruux.
Ra’iisal wasaaraha Yuhuudda ayaa diiday xabad joojin, waxaana wasiirka Gaashaandhigga uu sheegay inay ku dhaqaaqi doonaan howlgal dhinaca dhulka ah. 600 oo weerarro duqeyn ah ay sheegtay Yuhuudda inay ka fulisay Marinka Gaza ilaa Isniintii, ayna dishay 11 ka mida saraakiisha sare ee ururka Xamaas.
Dhinaca Yuhudda waxaa la sheegay inay ka dhinteen 7 qof, ayna dhaawacmeen ku dhowaad 230 kale. Duqeynta waxaa ku biiray madaafiicda Goobta oo ciidamada Yuhuudda ay dhigteen agagaarka Marinka Gaza.
Previous articleAkhriso: Saddexda Dal ee Jimcaha laga Ciidayo iyo Liiska Dalalka ay maanta u bilaabatay Ciidul Fitriga
Next articleMaxaa looga hadlay kulankii dhex maray RW Rooble iyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh..?